Orinasa sy mpamatsy boaty plastika China | Huizhou
Ny boaty mangatsiaka HDPE, antsoina koa hoe boaty mangatsiaka plastika, dia boaty cooler insulateive passive tsy misy herinaratra ampiasaina amin'ny boaty mangatsiaka toy ny vata fampangatsiahana. Ny boaty mangatsiaka misy habe sy endrika samihafa, dia mazàna ampiasaina amin'ny sakafo sy fanafody mifandraika amin'ny rojo mangatsiaka, toy ny sakafo vaovao, sakafo na santionany amin'ny fanafody, sns.
HDPE (High Density Polyethylene) boaty mangatsiaka kokoa
1.Ny boaty mangatsiaka HDPE, antsoina koa hoe boaty mangatsiaka plastika, dia boaty cooler insulation passive tsy misy herinaratra ampiasaina amin'ny boaty mangatsiaka toy ny vata fampangatsiahana. Ny boaty mangatsiaka misy habe sy endrika samihafa, dia mazàna ampiasaina amin'ny sakafo sy fanafody mifandraika amin'ny rojo mangatsiaka, toy ny sakafo vaovao, sakafo na santionany amin'ny fanafody, sns.
2.HDPE (High Density Polyethylene) fitaovana dia miorina amin'ny simika matanjaka amin'ny tanjaka sy ny hamafiny. Noho ny toetoetran'ny HDPE fitaovana manokana, ny boaty mangatsiaka HDPE anay dia matanjaka indrindra, mateza kokoa ary mahazaka harafesina mba hanomezana toky ny fandefasana azy ireo.
3. Amin'ny ankapobeny, ny boaty mangatsiaka dia misy sosona telo (anatiny, afovoany, ivelany) mba hisorohana tsara ny hatsiaka na ny hafanana amin'ny famindrana sy fivoahana ilay boaty. Ny tapany mafana afovoany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny insulate ny ao anatiny avy amin'ny tontolo ivelany miaraka amin'ny coefficients samihafa amin'ny fitarihana hafanana, izy ireo dia PU sy EPS. Ary ho an'ny fitaovana anatiny dia manolotra fitaovana PP, PS ary PE izahay miaraka amin'ny fomba famolavolana hafa.
4.We koa dia manolotra karazana kojakoja marefo toy ny locker, hinge ho an'ny safidinao.
1.HDPE boaty mangatsiaka kokoa dia natao ho an'ny fitoeran-javatra misy vokatra ary koa ny fisorohana ireo entana ao anaty fifanakalozana rivotra mafana na mafana na conduction amin'ny tontolo ivelany. Izy io dia boaty mangatsiaka kokoa amin'ny habe lehibe amin'ny fiasa mafana.
2. Ho an'ny sehatry ny sakafo vaovao dia ampiasaina amin'ny fitaterana vokatra vaovao, mora simba ary mahamay, toy ny: hena, hazan-dranomasina, voankazo sy legioma, sakafo voaomana, sakafo mangatsiaka, gilasy, sôkôla, vatomamy, mofomamy, mofomamy, fromazy, voninkazo, ronono, sns.
3. Ho an'ny fampiharana pharmacy, ny boaty mangatsiaka dia matetika ampiasaina amin'ny fandefasana fanafody biokimika, santionany ara-pitsaboana, zava-mahadomelina, plasma, vaksinina, sns. Ary amin'ity toe-javatra ity dia ilaina ny fanaraha-maso ny mari-pana.
4. Mandritra izany fotoana izany, izy ireo koa dia tsara ho an'ny fampiasana manokana any ivelany miaraka amin'ny fonosana gilasy na biriky ranomandry, mitazona ny sakafo na zava-pisotro mangatsiaka rehefa mitsangatsangana, mitoby, piknika, sambo ary manjono.
sosona insulated hafanana
Fanamarihana: misy safidy namboarina bebe kokoa.
1.Nona poizina sy namana tontolo iainana.
2.Featuring conductivity hafanana avo mba hitazomana ny hatsiaka ao anaty boaty mangatsiaka kokoa
3.Tsy misy herinaratra ilaina, fitaterana mora
4.Bigger habaka hitazonana entana bebe kokoa ao anaty boaty mangatsiaka.
5.Mahazaka mafy hampiasaina miverimberina.
6.Mahafinaritra amin'ny fandefasana sy ny fandefasana ny sakafo vaovao, ny sakafo voaomana ary ny fanafody.
7.Durable ary madio madio.
1.Ny haben'ny boaty mangatsiaka dia voafantina betsaka mba hahafahan'izy ireo ampiasaina amin'ny orinasa mpitatitra fandefasana entana sy fanafody na ho an'ny ivelany manokana hetsika.
2.Ny boaty mangatsiaka dia maharitra mba hahafahan'izy ireo mampiasa ny vokatra avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa imbetsaka.
3. Safidio ny fitaovana mafana indrindra mety tsara ho an'ny sosona afovoany mifototra amin'ny tanjonao manokana.
4.Matanjaka izy ireo ka azo ampiasaina matetika.
Teo aloha: EPP Cooler Box
Manaraka: Kitapo mafana